Engagqwali Okuthintekayo Emapheshana, Brass Okuthintekayo Impumulo, Bronze Okuthintekayo Emapheshana - JBP
Singabantu inkampani legatsha JBP GROUP (HK) CO., LIMITED. Abanolwazi iminyaka engaphezu kwengu-16 ocebile ekwenzeni ethintekayo phansi ebusweni izinkomba kanye neminye imikhiqizo CNC metal ngomshini. emakethe eyinhloko kokudabula Australia, eNew Zealand, Japan, I-USA, eJalimane, eFrance nakwamanye amazwe aseYurophu. Thina ebekelwa imishini eziphambili kanye nabasebenzi bethu abaqeqeshiwe lobuchwepheshe kuqinisekisa kithi okusezingeni eliphezulu ezingeni R & D ikhono.
Material imikhiqizo yethu kuhlanganisa: Marine Ibanga insimbi engagqwali, zethusi, ithusi, aluminium, zinc ingxubevange iraba kwemvelo-friendly futhi plastic.
I predominance embonini yethu itholakala kanje:
1, Sine isipiliyoni engu-16 'nokuceba yokukhiqiza metal izingxenye nge R ehola & D ikhono. izimakethe zethu eziyinhloko eYurophu, eNyakatho Melika, e-Australia nase-Asia. Singahlinzeka imikhiqizo izinga ngokuhambisana nemithetho yendawo kanye nemithetho.
2, Besilokhu ngokubambisana neNhlangano zamazwe ngamazwe ambalwa eqinile iminyaka. Kukhona iminyaka engaphezu kwengu-20 abanokuhlangenwe nakho ochwepheshe abazi kahle mayelana nemikhiqizo. Ngakho singaba ukukuqinisekisa ukuthi siyakwazi ukuphakela imikhiqizo izinga esekelwe ukulethwa fast.
3, The onjiniyela abaqeqeshiwe efektri yethu angaphakamisa bese eluleka kwabanye imiklamo emisha-eklanyelwe nawe khona uma kudingeka. Singabantu okuhle at okuklama futhi bazi kahle mayelana nesicelo imikhiqizo yethu eyinhloko.
4, Sine kanye nokuthekelisa namazwe angaphandle ilayisensi.
5, Kunenqwaba kosonkonteleka esitebeleni abeza kithi abazosenzela izinto ezithile ezinye izinto.
kwemboni yethu itholakala Cixi, + emkhawulweni Hangzhou Bay Bridge, okungukuthi kwebhuloho elide kakhulu phezu kolwandle. It is fike futhi isigamu sehora kusukela Pudong Airport 1 ihora kusukela Xiaoshan Airport, isigamu sehora kusukela Ningbo Airport ibe yizimiso yethu ngemoto kuphela. Uma eza usivakashele, sicela uxhumane nathi ukuze uthole ngiphakamisa.
Uma kukhona umbuzo, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi.
insimbi engagqwali ethintekayo TGSI-006 Insimbi / warni ...
Rubber izingxenye / izingxenye iraba olubunjiwe / udini ru ...